နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၃) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on November 19, 2014 at 11:24 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့ အပိုင်း (၁၃) မှာတော့ ကျန်းမာရေး အကြောင်း ပြောဆိုရာမှာ သုံးနိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Jane : I hear you've been ill.
Cathy : Well, I had the flu foracouple of weeks, but I'm fine now.
Jane : You're looking well. By the way, did you hear about Mrs. Jackson?
Cathy : No, what about her?
Jane : She had suchabad case of the flu that they had to take her to the hospital.
Cathy : Oh, I'm sorry to hear that!
အပေါ်က စကားပြောမှာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများကို ဒီတစ်ခေါက် လေ့လာကြမယ်။
"I hear you've been ill."
ဒီအပြောမှာ casual conversation မှာသုံးတဲ့ reported speech ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် that ကိုဖြုတ်ထားတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေးမှာဆိုရင် I hear that you are ill. လို့ရေးတယ်။
Interjection တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီစကားပြောမှာ မိတ်ဆက်စကားလုံး အနေနဲ့ သုံးထားတယ်။
မြန်မာစကားမှာလည်း "အဲ" တို့ "အင်း" တို့နဲ့ စကားစဖို့အတွက် သုံးကြတယ်။
ဥပမာ - "ခင်ဗျား ဆေးရုံး တက်ရတယ်ဆို။" "အဲ၊ တစ်ရက် လောက်ပါဘဲ။"
ဒီနေရာမှာ well ဟာ healthy ဆိုတဲ့ နေကောင်းတယ်ဲ၊ ကျန်းမာတယ် ဆိုတဲ့ adjective တစ်ခုပါ။ ဒီစာကြောင်းမှာ are looking ကတော့ linking verb တစ်ခုသာဖြစ်တယ်။
By the way ဆိုတာက "ဒါနဲ့ စကားမစပ်"လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ incidentally ပေါ့နော်။
You're looking well. By the way, did you hear about Mrs. Jackson?
အများအားဖြင့် အကြောင်း အရာ တစ်ခု အကြောင်း ပြောနေရာက တစ်ခုခုကို သတိရသွားပြီး ကြားဖြတ် ပြောတဲ့အခါ by the way ကို သုံးတယ်။ ဒီ မှာ Jane က Cathy ကို နေကောင်းလား လို့မေးနေရာမှ Mrs Jackson အကြောင်းသတိရသွားပြီး ကြားဖြတ်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့။
Sucha… that က so… that နဲ့ အသုံးခြင်း တူတဲ့ "result" sentence ဖြစ်ပါတယ်။
(Cause= bad case of flu > result= take her to hospital)
They ဆိုတာကို general အနေနဲ့ သုံးထားတာပါ။ ဒီစာစုဟာ "She had to be taken…" လို့ passive voice နဲ့ သုံးရတဲ့ အသုံးခြင်း တူပါတယ်။
ဈေးကွက်များ နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုအကြောင်း ပြောဆိုခြင်း (Talking abour...
တာဝန်များ နှင့် အလုပ်အတွက် လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများ အကြောင်း ပြောဆ...
Permalink Reply by Khin Lay Lin on November 19, 2014 at 13:16
Permalink Reply by win thuya maung on November 20, 2014 at 22:18